Otu UI 3.1 maka Galaxy Tab S6 na-ebupụta ọnwa abụọ tupu oge | Gam akporosis
Ọzọkwa, ụmụ okorobịa na Samsung na-egosi na ụlọ ọrụ nwere mmasị na-emelite ha igwe na-akarị nkwa, ebe ha ka malitere oru Otu mmelite UI 3.1 maka Galaxy Tab S6, ọnwa abụọ tupu ụbọchị izizi izizi, ya bụ, maka naanị na Jamanị, mana ọ bụ ụbọchị ole na ole tupu ọ eruo Europe ndị ọzọ.
Ọhụrụ a dị ugbu a maka SM-865, a ihe nlereanya na njikọ LTE. Mmelite a nwere 2,2 GB, gunyere ihe nchekwa nke kwekọrọ na ọnwa Machị 2021 na nọmba ngwa ngwa bụ T865XXU4CUB7.
Banyere mwepụta nke nsụgharị maka Galaxy S6 na-enweghị njikọ LTE, ọ ga-abụ ihe gbasara izu ole na ole n'ọnọdụ kachasị njọ, ọ bụ ezie na Samsung nwere ike ichere ọnwa abụọ tupu ịmalite ya n'ahịa, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na o yighị.
N'oge a, ụmụ okorobịa si Samsung mafere Otu UI 3.0, n'ihi na ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ngwaọrụ a, ọ ga-aga site na ijikwa One UI 2.5 na One UI 3.1, nsụgharị nke oyi akwa nhazi nke gụnyere ọnụọgụ nke mmelite, njirimara ọhụrụ na njirimara ọrụ onye ọrụ ka mma.
Iji lelee na mmelite ọhụrụ a adịlarị na mba gị, ị ga-aga Ntọala - Mmelite ngwanrọ. Ọ bụrụ na ọ dị, a na-atụ aro ka itinye mbadamba nkume ahụ ma chere nọdụ ala ruo mgbe ọ ga-emelite.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ịchọrọ ịbụ otu n'ime ndị izizi ịnụ akụkọ niile na-abịa na One UI 3.1 na Galaxy Tab S6, ana m akwado ka ị gaa na peeji nke ụmụ okorobịa ahụ SamMobile na budata ụdị a. Iji wụnye ya, gị a Windows jisiri kọmputa ga-achọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Otu UI 3.1 maka Galaxy Tab S6 na-ebupụta ọnwa abụọ tupu oge